Maqal: Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya oo loo soo jeediyay Dhaleeceyn – SBC
Maqal: Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya oo loo soo jeediyay Dhaleeceyn
Dad isugu jira aqoonyahano, siyaasiyiin iyo shacabweyne kala duwan ayaa cabasho ka muujiyay madaxda sar sare ee dowlada federaalka Soomaaliya siiba madaxweynaha Dowlada federaalka Xasan Sheekh Maxamuud.
Dadkan ayaa cabashoyinkooda ku saleeyay in madaxda sar sare ay ka gaabiyeen xaaladaha uu dalka ku jiro, ay la yimaadeen wax qabasho la’aan iyo arimaha amaanka Muqdisho iyo dalkaba oo ka sii dareysa.
“Waxaa soconaya Sistam Sharci daro ah oo ay ku socdaan madaxda sar sare, hadaan madaxweynuhu meesha ka bixin, oo aan xal loo helin sistamka sharci darada ah, wax hagaagaya ma jiraan” waxaa sidaasi yiri Siyaasi Daahir Ciiro oo isagu mar ka mid ahaanjiray Baarlamanadii Somalia soomaray.
Waxa uu intaasi ku daray Siyaasigan in Amaanku ka sii darayay tan iyo intii la doortay madaxweynaha Soomaaliya ee haatan xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoona u sheegay Madaxweynuhu in uu ku fashilmay xukunka ayna haboontahay in uu isaga tago.
“Fashil baajira Balaaran, iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa oo aan lagu dhaqmeyn, amniga waxa masuul ka ah dowlada federaalka, waxaan ognahay in meeshii amniga dalka waxlaga qaban lahaa in lagu mashquulayo gobolo dalka ku yaala oo aayahooda ka tashanaya, waa nasiib daro” sidaasi markale waxaa yiri Xildhibaakii hore ee Baarlamanka Soomaaliya Daahir Ciiro.
Dadweyne kale oo Shacab ah islamarkaana ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka ayaa iyaguna qaba fegrad ceynkaas oo kale ah, waxayna ugu baaqeen in madaxweynuhu xilka isaga dego, hadiise ay sidan ka sii socoto ay xaalada dalka noqoneyso sidan iyo si ka daran.